नेपाल एयरलाइन्सको हङकङ उडानमा यस्तो कारणले लगाइयो प्रतिबन्ध! – PathivaraOnline
Home > समाचार > नेपाल एयरलाइन्सको हङकङ उडानमा यस्तो कारणले लगाइयो प्रतिबन्ध!
काठमाडौ । नेपालमा अहिले कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । नेपालवाट गएका ६ जनामा कोरोना पुष्टि भएपछि नेपाल एयरलाइन्सको हङकङ उडानमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । लामो समय देखि बन्द भएको उडान सुचारु नहुँदै नेपालीमा कोरोना देखिएपछि फेरी बन्द भएको हो ।
हङकङ पुगेका ११ जना मध्य ६ जनामा सोमवार कोरोना पुष्टि भएको छ । नेपालीहरुमा कोरोना पुष्टि भएपछि त्यहाँको प्रशासनले नेपाल एयरलाइन्सको उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। चिनिया समाचार संस्था द स्टयान्डर्डले सो कुराको पुष्टि गरेको छ ।
सोमवार त्यहाँ पुगेका ११ जना मध्य ७ जना विदेशीहरुमा कोरोना देखिएको हो । ति मध्य ६ जना नेपालका मात्र हुन् । अन्य ४ जना स्थानिय नागरिक रहेको समाचारमा जनाईको छ । ७ जनामा एक जना भारतीय नागरिक हुन् । चार जना महिला र दुई पुरुष नेपालीहरुमा कोरोना पुष्टि भएको हो ।
चुवाङका अनुसार हङकङ सरकारले दुई हप्ताका लागि नेपाल एयरलाइन्सको विमानलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। ‘यो आदेश अक्टोबर ४ देखि १७ सम्मको लागि लागू हुनेछ,’ उनले भनिन्।
०७७ साल असोज २१ गते, इश्वी सन २०२० अक्टोबर ०७ तारिख बुधबार, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य!
साँच्चै सिसिटिभी फुटेजमा देखिएका मध्यरातमा ठेला गुडाउने को थिए ?